I-Aula de Escritores, isikole semibhalo esiphayona saseBarcelona | Izincwadi Zamanje
I-Aula de Escritores, isikole semibhalo esiphayona saseBarcelona
Unyaka omusha ususondele, futhi nezinqumo ezintsha. UStephen King wake wathi: «Ukuze ube ngumbhali, into yokuqala ukwenza izinto ezimbili: funda okuningi bese ubhala okuningi. Angazi nganoma iyiphi indlela yokuzihambela ». Isizathu asishodi, kepha akukaze kubuhlungu ukuba nesisekelo esiqinile ngandlela thize. Yilapho izikole zemibhalo zisebenza khona.
Namuhla sethula isikole i-Aula de Escritores, isikole sokuqala eBarcelona. Isungulwe e-1995 nguLluc Berga futhi isenkabeni yendawo yaseGracia, lesi sikole sizimise njengesinye sezibaluleke kakhulu eBarcelona.
U-Aula de Escritores wayeyiphayona kulo mkhakha, futhi unyaka nonyaka basungula futhi bakhe amaphrojekthi amasha. Sekuyiminyaka engaphezu kweyishumi isikole sinezindlu zaso zokushicilela, I-Editorial Hijos del Hule ne-Editorial Cronos, eyokugcina ihlose ukushicilela ideskithophu.
2 Izifundo nothisha:
3 IHijos del Hule ne-Editorial Cronos:
4 Amaphrojekthi akho:
5 Xhumana Nekilasi Lababhali:
Lesi sikhungo semfundo ephakeme asinawo kuphela umsebenzi wokufundisa ngamasu okulandisa kepha, ngokungafani nezinye izikole, sikhuthaza ukuzigxeka. Futhi lokhu, yize kubiza kancane ukuhlanganisa ekuqaleni, kuyinto ebalulekile ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili futhi sifunde emaphutheni ethu. Ukuqhubeka kokufunda nokubhekelela izinto ezithile kuyizinto ezisemqoka ekuqeqeshweni okunikezwa isikole.
Kulabo kini abangahlali eBarcelona noma abangakwazi ukuya mathupha ngenxa yesikhathi, u-Aula de Escritores unikela ngezinhlobonhlobo zamasifundisane nezifundo online. Kokubili ezifundweni zobuso nobuso nalezo ezenziwayo online, iphuzu elibaluleke kakhulu ukugqamisa ukuzibophezela kwabasebenzi bokufundisa. Ngesikhathi sezifundo, abafundisi baneqhaza eliphelele esinyathelweni ngasinye esithathwa ngumfundi.
Kepha lokhu kuzibophezela esikhuluma ngakho akugcini lapho. Mhlawumbe elinye lamaphuzu azuzisa kakhulu kubafundi ukubona umsebenzi wabo ushicilelwa. Minyaka yonke, isikole sethula i-anthology ngezindaba ezinhle kakhulu zabafundi. Okuthiwa ngokungangabazeki, izikole eziningi zemibhalo azinikezi.
U-Ana Marín, u-Ignacio García, uGemma Solsona noS. Lanchares, baphethe izimfundiso ezahlukahlukene ezinikezwa isikole. Yize okuphumelele kakhulu kuyizifundo zokubhala zokuqamba nokulandisayo, Singathola nezindaba ezimfishane, izinkondlo, amanoveli, ukuboniswa kwesikrini kanye nezifundo zokushicilela nezamadeskithophu. Njengoba ukwazi ukubona, ukunikezwa kungaphezu kokuqedelwa futhi inani lemali lingaphezu kokwanele.
IHijos del Hule ne-Editorial Cronos:
Njengoba sishilo ngaphambili, I-Aula de Escritores ibe nendlu yayo yokushicilela iminyaka engaphezu kweyishumi, futhi lokhu kuyinzuzo enkulu. Akunandaba noma ngabe usuthathe isifundo esikoleni noma cha, umshicileli unikeza izeluleko namaphakethe ahlukene wokushicilela incwadi yakho. Kodwa-ke, insizakalo isho ukuthula okukhulu kwengqondo, ikakhulukazi kubafundi. Iqiniso lokukwazi ukuthembela kubantu abakuphelezele kuyo yonke le nqubo, lisinikeza ukuphepha okungenzeka besingeke sibe nakho sisodwa.
Amathuba ahlinzekwa yilaba bamemezeli makhulu. Kusukela ekubuyekezweni kombhalo wesandla, ukwakheka, ukushicilelwa kwamakhophi ahlukahlukene, ukusatshalaliswa ezitolo ezidayisa izincwadi kulo lonke elaseSpain nasezitolo ezibonakalayo ngisho nezethulo nezitendi eSant Jordi (umkhosi wesifunda okhokhela incwadi). Lezi ngezinye nje zezinsizakalo, kepha ungafunda ngokucophelela kuwebhusayithi yabo amaphakethe ahlinzekwa ngezindleko zawo ezijwayelekile. Ukuthola umbono, izindleko zokuzishicilela cishe amakhophi ayikhulu anazo zonke izinsizakalo ezifakiwe kuzoba cishe ngama-euro angama-700. Izindleko ezingaphezu kokufanelekile zazo zonke izinsizakalo ezinikezayo
Phakathi kokunye, isikole njengamanje senza i- iphrojekthi ehlangene ne-University of Barcelona ukushicilela incwadi yezindaba ebhalwe ngabafundi bakuleyo nyuvesi futhi ehlobene namaLungelo Abantu. Enye inhloso eqhubekayo esingayijabulela ngonyaka ozayo ukuthi kungenzeka ukuba nemincintiswano ivulekele wonke umuntu. Laba bazoba nabafundi bakudala njengejaji.
Njengoba ukwazi ukubona, i-Aula de Escritores isikole esisebenza kakhulu, esibandakanyekayo futhi esivulekele amathuba amaningi wokubambisana.
Ngakho-ke uma enye yezinhloso zakho zalo nyaka ozayo bekungukuveza ubuciko bakho, awusenaso isizathu sokungakwenzi.
Xhumana Nekilasi Lababhali:
C / Sant Lluís nº 6, phansi, iBarcelona
NgoLwesibili kuya ngoLwesine kusukela ngo-18: 00 ntambama kuya ku-22: XNUMX ebusuku.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » I-Aula de Escritores, isikole semibhalo esiphayona saseBarcelona
Izindaba zemibhalo uSeix Barral: Mashi 2017